फिचर स्वास्थ्य समाचार
दिनेश गौतम काठमाडौं, १५ चैत
कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)ले लकडाउन शहर । सुनसान छ । मानिस घरभित्रै गुम्सिएर बसेका छन् । चोकचोकमा नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी । फाट्टफुट्ट अत्यावश्यक सामग्री बोकेका सवारी साधन । न धुलो, न धुवाँ । कोलाहलबाट मुक्त सडक ।
बन्द शहरमा खुलेको नीलो आकाश ।
लकडाउन भएको पाँचौँ दिन । चैतको उराठिलो घाम । मध्य दिउँसाे । हिँडडुल गर्न बन्देज । नेपाल प्रहरीले माइकिङ गर्दै छ, ‘घरबाट बाहिर ननिस्कनू । साबुन-पानीले हात धुनू । मास्क लगाउनू । भीडभाडमा नजानूू ।’
शनिबार कोटेश्वर–बालकुमारी सडकखण्डमा प्रहरीले कोरोनाबाट जोगिन अपनाउनुपर्ने सतर्कता माइकबाट भन्दै थियो । त्यसैको अगाडि थिए १७-१८ जना युवा।
राप र तापले चिटचिट पसिना । निन्याउरो अनुहार । मुखमा मास्क । खुट्टामा लोतावाले चप्पल र १-१ वटा झोला भिरेका ।
‘कहाँ हिँड्नुभएको ?’, हामीले सोध्यौँ ।
‘मजदुर हौँ सर, घर जान लागेको’, अगाडि रहेका होरिल पटेलले मुख खोले । डर, त्रास र भोकले शिथिल आवाज थियो उनको ।
‘अनि बन्दमा किन हिँड्नुभएको त ?’
‘हिँड्नु हुन्न, बन्द छ भन्ने पनि थाहा छ तर नहिँडेर के गर्ने ? हामी भोकै मर्नु त ? आज ५ दिन भयो, खानेकुरा छैन । खानेकुरा भए पनि किन्न पैसा छैन । दिउँसो काम गरेर बिहान बेलुका पेट भर्नेे हामी, काम बन्द भए पनि पेट बन्द नहुने रहेछ अनि घर नहिँडेर के गर्नु त ?’
आक्रोश पोख्छन् पटेल ।
१८ जनाकाे टोलीको नेतृत्व गरेर हिँँडेका रहेछन् उनी । सबै मिलेर ५ हजार रुपैयाँ जम्मा पारेर काभ्रेको धुलिखेलबाट उनीहरू तराई घर जान हिँँडेका रहेछन् । कोही बारा, कोही रौतहट, कोही वीरगञ्ज पुग्नुपर्ने । जे पर्ला, त्यही टर्ला भनेर काभ्रेबाट बिहान ७ बजे हिँँडेका उनीहरू बालकुमारी आइपुग्दा १२ बजेको थियो ।
थाकेका अनुहार । हिँडेरै पुग्नु छ घर । कति दिन लाग्ने हो, थाहा छैन । झोलामा चाउचाउ र बिस्कुट बोकेका रहेछन् । पानी पनि किन्नुपर्ने यो शहर । कोरोनाभन्दा भोकले मर्नुपर्ने अवस्था । झोला बोकेर बाटो तताउनुको विकल्प ती युवासँग थिएन ।
हामीले क्यामेरा तेर्स्याएपछि प्रहरीको टोली पनि आइपुग्यो ।
प्रहरीको टोलीले पनि सोधखोज गर्‍यो । उनीहरूको उही जवाफ । ती प्रहरीले आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा फोन गरे- ‘यहाँ १८ जनाको टोली छ । घर जान लागेका रहेछन् । तराई पुग्ने रे, के गरौँ सर ? जान दिऊँ कि नदिऊँ ?’
‘जान नदिनू’, उताको जवाफले ती युवा ङिस्रिक्क पर्छन् । आँखाबाट आँसु झारूँलाझैँ देखिन्थ्याे अनुहार । उनीहरूको विलाप कसले सुन्ने ?
प्रहरी भन्छन्, कोरोना सर्‍यो भने के गर्छौ ? जहाँ हो, त्यहींँ बस्नुपर्छ अहिले । जान मिल्दैन । माथिको आदेश छ ।
प्रहरीको कुराले झन् आत्तिन्छन् ती युवा ।
‘सर, त्यसो भए यही सडकमा भोकभोकै मरौँ ? यहीँ बसौँ ?’, पटेल कड्किन्छन् ।
प्रहरी पनि अवाक् हुन्छन् । केही बेर प्रहरी नै मौन बस्छन् । न ती युवाको पाइला अगाडि बढ्यो, न त प्रहरीले केही गर्न नै सक्यो । केही बेर उनीहरू त्यहीँ रोकिए ।
बिहानै धुलिखेलबाट हिँडेका उनीहरूको पेटमा अन्न परेको छैन । भोकभोकै हिँड्नुपरेको छ । धुलिखेलदेखि सयौँ ठाउँमा यसरी नै प्रहरीसँग मुकाबिला गर्दै आएका रहेछन् ।
त्यसपछि प्रहरीले अरू नै बाटोबाट जान सुझाए । रोकेर पनि प्रहरीले कहाँ राख्नु ? राखेर के खुवाउनु ? प्रहरी नै दुविधामा देखिन्थे ।
त्यसपछि उनीहरू खोलाको बाटो हुँदै आफ्नो गन्तव्यमा लागे । अन्त्यमा पटेलले आफ्नो फोन नम्बर दिँदै भने, ‘४ दिन लागोस् कि ५ दिन, पाए ढुवानी गर्ने गाडीमा जाने नत्र हिँडेरै घर पुग्ने हो सर !’
लकडाउन भएको ५ दिन भयो । सबैभन्दा बढी मर्कामा मजदुर परेका छन् । दिउँसो काम नगरे बेलुका चुह्लो बल्दैन । त्यस्ता नागरिकका लागि राहत प्याकेज ल्याउन सरकारले ढिलाइ गरेको त छैन ? आफैँले आफैँलाई प्रश्न गरेँ ।
शायद खान र बस्न पाएकाे भए याे १८ जनाको टोलीले हिँडेरै घर जानुपर्ने स्थिति आउने थिएन । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदा कोरोना सर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यो जोखिम पनि कम हुने थियो ।
हाम्रो बाइक रिङ रोडतर्फ मोडियो ।
बल्खु चोकअगाडि भेटिए भक्तपुरका सन्तोष केसी । उनी अर्घाखाँचीदेखि आएका रहेछन् । कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा काम गर्ने उनको पनि समस्या उही । बीचबीचमा गाडी, कतै हिँड्दै गरेर पाँचौँ दिनका दिन उनी काठमाडौं टेकेका रहेछन् । डर र त्रासमै देखिन्थे उनी । कतिबेला भक्तपुर घर पुगेर आनन्दको सास फेरौँ भन्ने प्रतीक्षामा देखिन्थे ।
बल्खु चोकैमा अर्को ४ जनाको टोली पनि भेटियो । उनीहरू वीरगञ्ज हिँडेरै जान लागेका रहेछन् ।
यी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । देश नै लकडाउन भएपछि कोठाभाडामा बसेर मजदुरी गर्नेहरू यसरी नै नाकाबाट बाहिरिइरहेका छन् ।
मजदुरहरू बल्खु हुँँदै फर्पिङबाट घर जाने रहेछन् । दूरी छोटो पर्ने भएकाले उनीहरूले यो सडकखण्डको प्रयोग गरेका रहेछन् । कतिपय मजदुर खाद्यान्न, तरकारी, ग्यास, पानीलगायत ढुवानी गर्ने गाडी चढेर जाने रहेछन् ।
बल्खु चोकमै थियो प्रहरी चौकी । प्रहरीको पनि बाध्यता- माथिको आदेश मान्ने कि मजदुरको पीडा सुन्ने ?
प्रहरी सहायक निरीक्षक राकेश राजवंशीले भने, ‘समस्या छ सर, जहाँ हो, त्यहीँ बस्नू भन्यो, मान्दैनन् । मजदुरहरू खान पाएनौँ, पैसा छैन, के खाने भन्छन् । के गर्ने समस्यामा परेका छौँ ।’
आपतमा परेकालाई बल्खु नाकाबाट प्रहरीले ढुवानी गाडीमा हालेर पनि पठाउने गरेको रहेछ ।
‘आपतमा परेकालाई ढुवानी गाडीमा पठाउने गरेका छौँ,’ उनले भने, यसरी घर जानेमा अधिकांश मजदुर छन् ।’
घर हिँडेका टोलीबाहेक अरू मानिस सडकमा निस्किएका थिएनन् । चोकचोकमा नेपाल प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले कडाइ गरेको छ । पास भएकालाई मात्र आवतजावत गर्न दिएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । एकबाट अर्को व्यक्तिमा कोरोना नसरोस् भनेर नै कडाइ गरिएको हो ।
१८ जना टोलीको नेतृत्व गरेर हिँडेको पटेलको टोली यतिबेला कहाँ पुग्यो होला ? बाटोमा प्रहरीले फेरि रोक्यो कि ? कतै अलपत्र त परेका छैनन् ? के ती घर पुग्लान् त ?
अनि ४ घण्टापछि घर आइपुगेर पटेललाई फोन गरेँ ।
‘बल्खु-कलंकी सडकमा प्रहरीले हिँड्नै दिएन । हामी बागमती काेरिडोर हुँदै अहिले फास्ट ट्रयाकको बाटोमा पुग्यौँ । अब निजगढ निस्कन्छौँ । बल्खुसम्म जान दिएको भए ढुवानीको गाडी पाइन्थ्यो होला । अब हिँडेरै जाने हो । यो ठाउँको नाम भने ठ्याक्कै थाहा भएन । बाटोमा भेटेकाले निजगढ पुगिन्छ भनेका छन् । कसो नपुगिएला । घर पुगेर फोन गर्छु है सर !,’ पटेलले फोन काटे ।
घरबाटै बालबालिकालाई यसरी पढाउन सकिन्छ, यस्ता छन् पाठ्यसामग्री
कोरोना जोखिम : ७४ लाख बालबालिकालाई कसरी जोगाउने ?
डाक्टरले लगाउने पीपीई बनाउन महावीर पुनले पाए स्वीकृति
कोरोना जाँच गर्दा डाक्टरले लगाउने ‘पीपीई’ ड्रेस बनाउँदै महावीर पुन
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत १५, २०७६, १७:२७:००
#काेराेना त्रास #मजदुरकाे पीडा